आमा तिमी धादिङ | मझेरी डट कम
ks — Sat, 03/31/2012 - 19:27
यसवर्ष मकर सङ्क्रान्तिमा नरसिंहधाम पुग्नु अघि पुस २८ गते साँझ धादिङबेँसीमा शब्द शिविर आयोजना गरिएको थियो । शिविरका प्रमुख पाहुना थिए - नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव सनतकुमार रेग्मी । प्रसिद्ध गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेल, पुरानो पत्रिका अभिव्यक्तिका सम्पादक नगेन्द्रराज शर्मा, कविहरू वासु अधिकारी, राममणि दवाडी, पत्रकार तथा कवि हरिविनोद अधिकारीको पनि मज्जाको उपस्थिति थियो । इतिहासविद् प्रा.डा.राजाराम सुवेदी, भाषाशास्त्री प्रा.डा. मोहनप्रसाद तिमल्सिना, साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ हरि सिम्खडालगायतका व्यक्तिहरूले शब्दशिविरलाई निकै ऊर्जापूर्ण बनाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्य र आँखु खोलाका सम्पादकसमेत रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिनारायण निरौलाको साहित्यिक चेतना र साहित्य प्रेम रसमय थियो । २८ गते राति अबेरसम्म रचना वाचन र अन्तक्रिर्या जारी रहृयो । कविता लेख्नु एउटा कुरो त्यसको विवेचना गर्नु अर्को कुरा । आफ्नै कविताको धरातल बोध नहुनेहरू पनि ठूला कवि हुन्छन् तर त्यो बसाइँ साहित्यिक गहिराइ मापन र औचित्य खोजीमा केन्दि्रत थियो । आयोजकहरू भन्थे- गर्न खोजिएको पनि त्यसै हो । धेरैले भने -शब्दशिविर सार्थक रहृयो । भोलिपल्ट २९ गते बिहानै नवीनबन्धु पहाडीको उपन्यास कृष्णा र टीएन गोपीकृष्ण अधिकारीको लधुकाव्य ब्रहृमसभाको घुम्टी खोलियो । घुम्टी खोले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव सनतकुमार रेग्मीले । यी विमोचनहरूलाई शब्द संवाद नाम दिइएको थियो । धादिङका उर्वर साहित्यिक चेतना युवामा हस्तान्तरण र युवाभित्र हार्दिकताको खोजी संवाद र शिविरको अभीष्ट थियो र भयो पनि त्यसै ।
बिहानको बसाइ सकेर एउटा ठूलै बस चढेर लागेका थियौँ - नरसिंहधाम । धादिङबेँसीबाट बिस्तारै चढेको उकालो, पहाडी सुगन्ध र कविहरूको गफ । टाढा देखिने दृश्य र तिनै दृश्यहरूको अवलोकन । घुम्ती काटेर बस उकालो चढ्दा निङालपानीबाट देखिने ज्यामरूङ र त्यहीँ बितेको आफ्नो बालापन । म केहीबेर घोरिएँ । त्यति नै खेर ब्युँझाए धादिङे पत्रकारहरू पोषनाथ अधिकारी र शिव सिलवालले । ज्यामरूङसँग जोडे कलाको तन्तु र जिस्क्याए पनि । कविहरूको भनाइ थियो - आज ज्यामरूङमै बसूँ । त्यो त मेरो सौभाग्य हुने थियो मैले थपेँ । पछि उनीहरूले नै मानेन् र भने सल्यनटारमा फणिकान्त छत्कुलीहरू पर्खिरहेछन्, जानै पर्छ । लक्ष्य बदल्नु पनि त भएन । ज्यामरूङमा कुनै दिन अर्कै एउटा कार्यक्रम गर्ने सहमतिपछि हामी गोलाभञ्ज्याङबाट टारीबेसी हुँदै आँखु तर्‍यौँ । कञ्चन आँखु, हरियो वा नीलो पानी । फेरि याद आयो मङ्सिर २१ गते नेत्रावती क्याम्पसमा सम्पन्न साहित्यिक प्रतिष्पर्धा र मङ्सिर २२ गतेको सल्यनबेँसी जात्राको । र्फकंदा बसमै रेकर्ड गरेको रेडियो नेपालको मधुवन कार्यक्रम । कार्यक्रम आफूहरूले डाउनलोड गरेर पेन ड्राइभमा राखेको सुनाए तन्नेरीहरूले । २२ गते जात्राबाट र्फकंदा भने गोलाभञ्ज्याङबाट हिँडेरै ज्यामरूङ गएका थियौँ । मुरारी अधिकारी, पोषनाथ अधिकारी, प्रकाश सापकोटा, दीपेन्द्रसिंह थापा र मेरो साइँलो भाइ रमेश लम्सालको हिँडाइमा जोड चलेको थियो । आमाले पकाउनु भएको थियो मङ्सिरे तरुल । खुब खायौँ तरूल, गालेको अचार र भैँसीको दही । खाना खाइसकेपछि हामी हिँडेरै स्याउलीको बाटो हुँदै धादिङ्बेँसी झरेका थियौँ त्यहीँ साँझ रातिराति गरेर । हामीलाई कुरिरहेका थिए हरिनारायण सर र हेमराज पौडेल । रातभरि गफ गर्‍यौँ कलासहित्य र राजनीतितबारे । बागलुङ फोन गरेर युवा नेता प्रकाश पौडेललाई समेत सुनाएका थियौँ धादिङको खबर । आँखु तर्दा नतर्दैर् सबै कुरा दोहोर्‍याए पोषनाथले र नवीनबन्धुले आफू छुटेकोमा पछुतो माने । दीपेन्द्रसिंहको भनाइ थियो - बाटो जति साँगुरो यात्रा त्यति मिठो । खुब हाँसेका थियौँ यो भनाइमा र फेरि हाँस्यौँ एकपटक । दीपेन्द्रजी फेरि रातो भए ।
छयासी किमि लामो सडक आफ्नो छातीमा ओछ्याएर यात्रुहरूलाई राजधानी पठाउँछ धादिङ । कृषि उत्पादन तथा पशुपालन र अन्य घरेलु उत्पादनमा पनि उसको आफ्नै पहिचान र प्राप्ति छ । गणेश हिमाल, गौरीशङ्कर हिमाली शृङ्खला र तलतिर महाभारत पर्वतमाला । जाति, संस्कृति, रूपरङ र भूवनोट । यी हाम्रा काव्यिक स्रोत हुन् । आजमात्र हैन दैवज्ञकेशरी अज्र्याल, सुब्बा होमनाथ खतिवडा, सुब्बा केदारनाथ खतिवडा आदिको उपस्थितिले साहित्यिमा माध्यमिक कालदेखिकै योगदान छ । आजका यी कर्महरू तिनैलाई सम्झनु, तिनका पदचाप र योगदानलाई स्थायी बनाउनु र नयाँ पुस्तालाई अझ नयाँ र सहज बाटो दिनु हो । नयाँ बन्न र बनाउन पुरानो पनि थाहा पाउनु पर्छ र नयाँ भनेको के हो त्यो पनि जान्नु पर्छ । प्रत्येकले आफूलाई योजक ठान्नुपर्छ र संयोजन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । व्यक्ति इतिहासको निर्माता पनि हो र स्वयम् इतिहास पनि हो । नरसिंहधामको पुरानो धार्मिक इतिहास र तात्कालीन जीवन शैलीको अध्ययन एउटा पाटो होला र झट्ट हेर्दा साहित्यसँग त्यसको सम्बन्ध के भन्ने पनि लाग्ला तर मान्छेले उसको जीवन र इतिहास बिर्सेर न त नयाँ समाज बन्छ न त नयाँ युग । आफैँ, आफ्नै इतिहास र त्यसकै वैभव बिर्सेर त मान्छे कहाँ मान्छे हुन्छ र ? अर्काको रिस र अर्काप्रतिको अहँकारले मान्छेलाई खान्छ । इष्र्याले खग्रास हृदय अङ्गार हो, अङ्गारमा आगो हुँदैन । जीवन कोइला हुनुपर्छ र भर्भराउनुपर्छ आफैँभित्र । त्यही अन्तज्र्योतिले जीवनलाई सुकिलो पार्छ र बाटो देखाउँछ । अँध्यारो मन हुनेहरूको जीवन पनि अँध्यारो, कर्म पनि अँध्यारो, वर्तमान पनि अँध्यारो र भविष्य पनि अँध्यारो हो भन्ने मेरो विश्वास छ । जसले जे साधना गर्छ त्यही प्राप्छ गर्छ । झुसिलकीरा पुतली बन्छ र पुतली खरानी । जीवनलाई सहज बनाउने हो भने र छोड्ने हो भने अहङ्कार व्यक्ति नरसिंहधाम पुगोस् । त्यहाँ छ - विशाल ढुङ्गा र छरपष्ट ढुङ्ग्यानहरू । फरक फरक आकृति र त्यही आकृतिमा खै केके आरोपित गरेर मान्छे बेग्लै आनन्द र अतीत कल्पिरहन्छ । भीडहरूको साम्राज्य छिचोलेर एकान्तको राजधानीमा रमाउँदा हृदय हल्लिन्छ खुसीले । मान्छे सृष्टिकै उच्चतम नमुना तर कहिलेकाहीँ त्यही मान्छे विनाको एकान्त कति मीठो । कम्तीमा ५ किलोमिटर वरपर छैन मानव बस्ती र प्रकृति एक्लै छ । उसै त प्रकृति त्यसमाथि उही मात्र एक्लै । के छैन त्यहाँ ? फराक मैदान, मैदान टेकेर उभिएका हरिया पाखाहरू र सिलिक्क परेर सुइँकिँदा नदीहरू आँखु र बूढीगण्डकी । दुवै मिसिएको दोभान, ठीक पारि गोरखा जिल्लाको बोर्लाङको महादेवटारमा पर्ने राङ्दीघाट । धादिङका पचास गाविसमध्ये एक सल्यानटार र त्यसको पुछार बुटार । त्यहीँ जोडिन्छ चैनपुर पनि । सल्यनटार, बोर्लाङ र चैनपुर जोडिएर जुटेकोे समथर भूभाग र त्यहीँबाट अलिकति उठेको ढिस्को । ढिस्कोमै भर्खर प्राणप्रतिष्ठा गरिएका देव आकृति सहितको मन्दिर, धर्मशाला, वृद्धाश्रम र त्यहीँ हुने बुढ्यौली कुरा, तन्नेरी सम्झना र भविष्यका वार्ताहरू । मन्दिरको ढिस्क्यानमा उभिएर हेर्दा जता हेर्‍यो उतै भूस्वर्ग । लाग्छ हामी आफैँलाई हेरिरहेछौँ प्रकृतिको ऐनामा र मुस्कुराइरहेछौँ आफैँ ।
जस्ले मुसार्छ आँखाभरि ती दृश्य, हृदय पग्लन्छ र आनन्दको वर्षा हुन्छ रिमझिम । व्यक्तिगत जिन्दगीको भोकतिर्खा, पीडा, विस्मात वा उहापोह ! बाँच्नु छ सबैलाई । जीवन सबैलाई प्रिय लाग्छ तर प्रिय हुँदैनन् सबै घटना जीवनका । कतै रोइन्छ र कतै हाँसिन्छ पनि । कर्तव्य निर्वाह र निर्वाहकै लागि खेप्नु पर्ने सबै खाले अप्ठ्यारा । नकुँदिएको ढुङ्गा मूर्ति हुँदैन । नखोपिएको काठ बुट््टे झ्याल हुँदैन । हृदय नभत्कीकन मान्छे कञ्चन हुँदैन तर ती सबै भत्काइहरूलाई जोड्ने र फेरि सहज जीवन दिने औषधि प्रकृतिका यी कोमलतम दृश्यहरू हुन् । बाटाभरि ठोकिँदै र पैरिँदै झरेकै कारण नदी नदी भएका हुन् र शिशिर खेपेकै कारण प्रकृति यति प्यारी भएकी हो । प्यार बटुल्ने पहिलो सर्त पीडाको सञ्चयन पनि हो र धैर्य पनि हो । र्फकँदा यसरी गुन्गुनाएँ सबैले सुन्ने गरी -